सुखचैनाका बिधार्थीको आन्दोलन साम्य पार्न हतारमा शिक्षक सरुवा,रामपुरका अभिभावकहरु द्वारा आन्दोलन गर्ने चेतावनी - Nepal Post Daily
बीरगन्ज,१५ मंसिर – बीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. २१ सुखचैनामा बिधार्थीहरुले पठानपाठनको बिषयलाई लिएर गरी रहेको आन्दोलन साम्य पार्न बीरगन्ज महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाले हतारमा काजमा शिक्षक सरुवा गरेको छ ।
बीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. २१ सुखचैना स्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय गिता गजेन्द्रराज जोशी माबिका बिधार्थीहरुको अन्दोलन साम्य पार्न बीरगन्ज महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाले तालेवे राष्ट्रिय अधारभुत बिद्यालय रामपुरमा कार्यरत शिक्षकलाई गिता गजेन्द्रराज माविमा काज सरुवा गरेको छ ।बिधार्थीहरुको आन्दोलन उग्ररुप लिएपछि तातेको बीरगन्ज महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाले प्रा.बि.मा दरबन्दी रहेको शिक्षक सुमन चौरसियालाई काजमा गिता गजेन्द्रराज जोशी माबिमा पठाएको छ ।
यता यो काज सरुवाले समस्या समाधान भन्दा पनि समस्या झनै बल्झाई दिएको भन्दै तिवावे राष्ट्रिय अधारभुत बिद्यालयका व्यवस्थापन समिति, अभिभावक एवम् प्रअको भनाई छ । सरुवा फिर्ता नगरे यहाँका अभिभावकहरु पनि आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बिद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य लक्ष्मीकान्त मण्डले बताए । सरुवा गर्ने अधिकार महानगरलाई रहेको भए पनि हाम्रो बिद्यालयमा पनि शिक्षक पठाउनु पर्ने मण्डलको माग छ ।
२ सय भन्दा बढी बिधार्थी रहेको बिद्यालयमा जम्मा ४ जना शिक्षक रहेकोमा ९ महिना अघि पनि एक जना शिक्षिका सर्मिला सुवेदीलाई शिक्षा महाशाखाले काज सरुवा गरेकोमा हाल सम्म फर्ता भएको छैन् । थप एक जना शिक्षकलाई पनि काज सरुवा गरे पछि बिद्यालयको पठनपाठन नै अवरुद्ध हुने अवस्था आएको राष्ट्रिय अधारभुत बिद्यालय रामपुरका प्रअ सुरेश प्रसाद चौरसियाले बताए ।
काज सरुवा फिर्ता छिटै हुने बीरगन्ज महानगरपालिकाले बताए पनि कहिले फिर्ता हुने ग्यारेन्टी नभएको प्रअ चौरसियाको भनाई छ । बीरगन्ज महानगरपाकिलाको वडा नं. २७ मा रहेको स्कुलमा अधिकांश दलित तथा छिपडिएका वर्गको बिधार्थीहरु पठनपाठन गर्दै आएका छन् । गरिब वस्ती रहेको कारण शिक्षाका लागि अन्य कुनै साधन पनि नरहेको अभिभावकहरुको भनाई छ । २०७ जना बिधार्थी रहेको बिद्यालय २ जना शिक्षकको भरमा महानगरले चलाउन खाजेको स्थानियहरुले गुनासो व्यक्त गरे ।
बीरगन्ज महानगरपालिकाले यो वस्तीमाथी अन्याय गर्ने मनसायले प्रअलाई धाकधम्की दिएर शिक्षक सरुवा गरेको भन्दै यसलाई तत्काल फिर्ता गर्नु पर्ने स्थानियले माग गरेका छन् । काज सरुवा फिर्ता अथवा व्यवस्थापन नभए आन्दोलन गर्ने स्थानियहरुको भनाई छ । शिक्षक काज सरुवा भए पछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी सहितको टोली महानगरपालिकामा बुधवार पुगेको भए पनि मेयर र शिक्षा महाशाखा प्रमुखसँग भेटघाट हुन नसकेको विद्यालयका प्रअ चौरसियाले वताए ।
बीरगन्ज महानगरपालिकाले शिक्षा महाशाखाका लागि छुट्याइएको करोडौंको बजेट हरेक बर्ष फ्रिज हुदै आएको छ । तर बिद्यालयमा शिक्षक पुर्ति गर्ने सवालमा महानगर फेल हुदै आएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि महानगरपालिकाले राजनिति गर्न खाजेको कारण समस्या समाधान भन्दा पनि बल्झिदै गरेको महानगरवासीको बुझाई छ ।
Previous articleसर्वोच्चमा गोला प्रणालीबाट पेसी,बारको आन्दोलन जारी
Next articleबीरगन्जमा मेड इन नेपाल एक्स्पो एण्ड फुड फेस्टको अयोजना हुने